USA: Nin Soomaali ah oo loo qabtay dilka xaaskiisa. - NorSom News
USA: Nin Soomaali ah oo loo qabtay dilka xaaskiisa.
Booliska gobolka Arkansas ee dalka Mareykanka ayaa nin Soomaali ah xabsiga dhigay, kaddib markii uu dilay xaaskiisa, sida lagu shaaciyay wargayska WFIE.
Booliska ayaa sheegay in Maxamuud Cabdiqaadir, oo 21 jir ah ay qabteen maalintii Sabtida ahayd. Ka dib markii ay su’aalo weydiiyeen ayuu Cabdiqaadir ku jawaabay in xaaskiisa laga yaabo inay tahay mayd ayna taalo gurigooda.
Booliska magaalada Henderson ayaa tagay guriga qoyskan ay daganaayeen oo ku yaalla magaalada Kentucky, waxa ayna heleen maydka xaaskiisa oo ku jira qaanad gudaheeda.
Cabdiqaadir ayaa lagu riday xukun ka dib markii lagu helay caddaymo ku saabsan inuu gabadha soo gaarsiiyey dhaawacyo.
Ninkan ayaa waxa uu daryeelayay ilama 9 bilood jir ah xilligii xabsiga loo taxaabayey. Ilmaha ayaa hadda waxa gacanta ku haya hey´adda arrimaha daryeelka carruurta ee Arkansas.
Previous articleNorway: Madaxa Nav ayaa ka mushaar badan reysulwasaaraha
Next articleMadaxweyne ku xigeenka Mareykanka oo ku biiray dagaalka ka dhanka ah Xildh. Ilhaan Cumar